Options talinayo u GOM Player for Mac
> Resource > iPhone > GOM Player Wixii Mac
Maqlay ciyaaryahan GOM u mararka qaar laakiin ma ahan diyaar u ah in aad Mac? Waa quruxsan murugo ka fikirin in sababta ay dhulka ku dhiirigelinayaan in uu doonayo inuu xaddido dadka isticmaala ay ka mid kaliya madal ee nidaamka qalliinka? Ma waxay noqon doonaan kuwo inta badan ka sahlan u isticmaala dhamaadka si ay u awoodaan in ay si sax ah u isticmaasho uu isku waslad la of software labada mid ka mid ah nidaamka doorashada? Sida muuqata, waxaan sugayay oo dhan waxaa garoonka ka aragti ka duwan. Waa adduunka ganacsiga halkaas oo wax kasta oo dhan oo ku saabsan tartan iyo share suuqa. Waa hagaag, in sababta aanu isku daynay ugu fiican si aan u ogaado waxa aad isticmaali karto sidii kale in ciyaaryahanka GOM iyo dabcan waa u Mac tan iyo Window ayaa si fiican u daboolay.
Alternative 2: Wondershare Player u Mac
Farqiyada u dhexeeya bedelan karo
VLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa qiyaastii in ka badan 10 sano, ugu horeysay bilaabay mashruuc waxbarasho laakiin markii dambe ka dhigay inay dadweynuhu heli karaan hoos License GNU Guud ee Dadweynaha. The version ugu horeysay ee ciyaaryahanka ayaa waxaa si rasmi ah uguma sii daayay ilaa 2009, waana soo bixi on inta badan dhufto ee sida Windows, Mac OS X, Linux iyo iwm Inkastoo version Mac waxaa loo arkaa in ay sii daayo more dhawaan, kuwa ayaa hore u isticmaali on Windows ka heli doontaa in ay aad u yaqaan.
Maaddaama ay isku mid ah marka la eego sifooyinka, media player VLC noqon doona meesha ugu sareysa ee liiska ciyaaryahan kale GOM u Mac. Waxaa wax laga xumaado, aad ka maqnaan doonaa maragkacaan isbedel sida uu shaqeeyo oo kaliya on Windows iyo madallo kale laakiin aan u Mac OS X! Haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaababka ay, si fudud u raaci link HALKAN .
Ciyaaryahanka soo socda lagu talinayo kale GOM aad Mac noqon lahaa Wondershare Player . Mar kale, aad la siiyey fursad u download it-gal Mac non nidaamka qalliinka oo kale haddii aad rabto; kiiskan on Windows. Waxaa kuma koobna Mac OS kaliya. Waa maxay gargaarka ka ahayn? Ugu yaraan Waxaad ku talo-bixin karaa in ay saaxiibo yihiin oo aan la isticmaalin Mac ah haddii aad si dhab ah u jeceshahay.
Sida hoos lagu muujiyey, badhamada tallaabo ah waxaa la sameeyey badan la heli karo ama la dhigay baxay in isticmaala sahlo. Waxaad si fudud loo maqli karo, ku xasil, joojiyo, si degdeg ah weeraryahanka, qaado shot SNAP ah, waa in la ballaariyo baaxadda shaashad buuxda iyo wax ka badan ku bar menu hoose ee interface ka.
In la barbardhigo media player VLC, waxaad filan kartaa in ciyaaryahanka Wondershare ah ay awoodaan in ay abuurtaan ama bilowdo in ay codsiga dhakhso. On top of in, waxaad kartaa in la aw in loo maqli karo ee files aad loo sameeyaa hab macaan leh qaab ciyaareed joogta ah oo dheeraad ah. In in, waxaan ula jeedaa shilalka ka yar ama PC is deldelay nuskii goobta xiiso leh. Taasi waa waxa ugu dambeeya ee aad doonayso dhacay. Waxa kale oo jira taageero wanaagsan HD videos iyo ku qaadan doonaa isticmaalka xasuusta processor ka yar. Ka sokow in, waxaad u timid doonaa in ay aragto in design iyo interface waa nadiifsan oo toosan, cuntada halkan ka raaxo leh muddo ku dhow kasta oo nooc ka mid ah dadka isticmaala, loo dhan yahay ee bilowga ah.
Dhinaca kale, si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah badhamada tallaabo joogto ah ma laga yaabaa in sida boosaska badan marka la barbar dhigo ciyaaryahan warbaahinta VLC. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto iyo Dicumintiyo marka ay timaado in weeraryahanka doonaya inay goobta gaar ah. Laakiin weli, arrinta ma aha mid aad u muuqata haddii aad mid ka mid ah kuwa daawadayaasha oo u muuqdaan in ay u janjeera ee tahay doonaya jidkii dhan. Haddii taasi kiiska, Alternative 1 ciyaaryahanba ay taam noqdaan ka wanaagsan. Muuqaaladan kale in ciyaaryahanka Wondershare ma joogo par iyadoo ciyaaryahanka uu warbaahinta VLC noqon lahaa subtitles ah. Waa yar xoqdo oo si fiican u soo bandhigay warbaahinta VLC ciyaaryahanka ayaan ku leeyahay.
Waxaa aad u tagto, taasi aniga oo ka mid ah laba kale oo ah in aad isku daydo in ay u badan tahay karaa ciyaaryahan GOM aad u Mac. Ha iloobin in aad ii soo sheeg sidee ayey aad maxkamadda ka daba tegin!
2 Siyaabaha u hagaagsan Facebook Xiriirada la iPhone